ဒီနေ့ ဆရာမတွေ အားလုံးအလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်.. ကျောင်းသားစုံညီပွဲတော်အတွက် အစည်းအဝေးထိုင်နေကြတယ်.. အတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်မူမူအေးက အတန်းခေါင်းဆောင်ကို စကားများတဲ့သူ နာမည်မှတ်ခိုင်းပြီး အစည်းအဝေးသွားတက်တော့ အတန်းခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်က လေပေါနေပြီး တစ်တန်းလုံး ပွတ်လောညံနေတော့တယ်။
ကဗျာတို့ သူငယ်ချင်း၎ယောက်အုပ်စုလည်း နောက်တန်းမှာထိုင်နေတဲ့ ကျောင်းသား၎ယောက်နဲ့ ပါဆယ်ဂိမ်းကစားကြတယ်။ ပါဆယ်ဂိမ်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မဲလိပ်လေးတွေမှာ ပြစ်ဒဏ်တွေရေးပြီး မျက်စိမှိတ်ပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ကျောင်းသား သီချင်းဆိုရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ လက်ထဲမှာ ပါဆယ်ထုပ်ရှိတဲ့သူက မဲလိပ်နှိုက်ပြီး အထဲမှာရေးထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းလုပ်ရတယ်။ မဲလိပ်တွေကို ယောကျာ်းလေးတွေက တစ်ဝက် မိန်းကလေးတွေက တစ်ဝက် ရေးရတယ်။ ကဗျာတို့ကတော့ မိန်းကလေးတွေပီပီ မကောင်းတာတွေရေးရင် ကိုယ့်အလှည့်ကိုယ့်မဲ ပြန်ကျမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ အပြစ်ဒဏ်လေးတွေပဲရေးတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ဘာရေးလည်းတော့မသိဘူး။ ဒီလိုနဲ့ စဆော့ကြတယ်။ ပြစ်ဒဏ်တွေကလည်း ရယ်ရတယ်။ မျောက်ကကခိုင်းတာတို့ ကြော်ငြာဆိုခိုင်းတာတို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဆော့လာရင်း တစ်ခါမှာတော့ ယောက်ျားလေးတွေ အဖွဲ့ထဲက ဇော်အောင်ကို မဲနှိုက်ရမဲ့အလှည့် ... ကျတဲ့မဲက ထူးထူးခြားခြား ပေါက်တတ်ကရ.. မိမိနှစ်သက်ရာ ကောင်လေး (သို့) ကောင်မလေးလက်ကို ဆွဲပြီး မော်ဒယ်လျှောက်ပြပါတဲ့။ မဲလိပ်ဖတ်သံ ဆုံးတဲ့နောက် ဇော်အောင်က ပြီတီတီပြုံးလိုက်ပြီး ရုတ်တရက် ကဗျာလက်ကိုကောက်ဆွဲပြီး ထိုင်ခုံတွေကြားမှာ လိုင်းခြားထားတဲ့နေရာလွတ်ကို ဆွဲသွားတယ်။ ကဗျာလည်း ရုတ်တရက်အရမ်းရှက်သွားပြီး ထူပူသွားတယ်။ ၄တန်းဆိုတော့ အပျိူမကြီးလိုလို အပျိူလေးလိုလို ပဲများတတ်တဲ့ အရွယ်ဆိုတော့။ နောက်မှ သတိဝင်ပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ အိမ်သာသွားဦးမယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဇော်အောင်ကို စိတ်ဆိုးသလို ဘာလိုလိုပေါ့။ အိမ်ရောက်တော့ မေမေကို ပြောပြတယ် သမီးကိုကောင်လေးတစ်ယောက် လက်လာဆွဲတယ်လို့။ မေမေက ရယ်ပြီးတော့ ငါ့သမီးလည်းမလွယ်ပါလားတော် ဆိုပြီး ပြုံးနေရော။ မေမေကလည်းဆိုးပါ့။ ကဗျာက ရှက်နေပါတယ်ဆို ပိုရှက်အောင် လိုက်စနေပြန်ပါပြီ။
အတန်းတွေကို လူနည်းအောင်ခွဲလိုက်လို့ ကဗျာGတန်းကို ရောက်လာပေမဲ့ ဇော်အောင်နဲ့တော့ အတန်းတူတုန်းပဲ။ အဲ့ကောင်ဟာလေ တကယ်ပဲ မျက်နှာပြောင်တယ်။ ၄တန်းတုန်းက လက်ဆွဲတဲ့ကိစ္စပြီးကတည်းက လူကိုတွေ့ရင် ပြုံးစိစိ ပြီတီတီနဲ့ ကဗျာဖြင့် ကြည့်လို့မရပါဘူး ။ ဘာတဲ့ ဟိုနေ့က ကဗျာတို့ အနီအသင်းခေါင်းဆောင်ပြောတာ နားထောင်လိုက်ရတယ်။ ဇော်အောင်က နင်အလှူငွေထည့်ထားတဲ့ ၅၀တန် ၂ရွက်ကို သူ့၅၀တန်တွေနဲ့ လာလဲသွားတယ်တဲ့ .. နင့်ပိုက်ဆံကို သိမ်းထားချင်လို့ဆိုပဲ နင့်ကိုတော့ မရိုးတော့ဘူးနဲ့ တူတယ်နော် ဟဲဟဲ တဲ့။ ကြည့်ပါလား လုပ်သွားတဲ့ ပုံကိုက လူကို သူများတွေ တမျိူးထင်အောင် တမင်လိုက်လုပ်နေသလိုပဲ။ ကဗျာကတော့ဖြင့် စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးကို။
သူဆိုးပုံတွေ ပြောရရင် ပြောလို့ကုန်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ မိဘခေါ်ခံထိတာလည်း အကြိမ်ကြိ်မ်။ ရန်ဖြစ်ပြီဆို သူ့နာမည် ထိပ်ဆုံးက။ သူများနဲ့ရန်ဖြစ်လို့ ချလို့ နာမည်စာရင်းပါတယ်မထင်နဲ့။ ရန်ဖြစ်နေတဲ့သူ၂ယောက်ကို ဘေးနားကနေ ချဟ ဆော်ဟေ့ ရိုက်ဟ လုပ်ထား လုပ်ထား အဲ့လိုမျိုးအားပါးတရ အားပေးလွန်းလို့ ဒင်းက ပွဲတိုင်းကျော်ဖြစ်နေတာ.။ ရန်ပွဲတိုင်း ပါလေရာ ငပိချက်။
တစ်ခါကဆိုလည်း အတန်းအပြင်မှာ ၃နာရီလောက် အထုတ်ခံထားရတယ်။ အမှုက စာသင်နေချိန်မှာ ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲခြောက်ပြုတ်စားမှု.... ပြုတ်စားတာမှ ရေနွေးဆူဆူ ပန်းကန်ဇွန်း အပြည့်အစုံနဲ့နော်။ ဒါတွေက သူ့ဟာတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ အတန်းမှုးရုံးခန်းထဲက အတန်းပိုင်ဆရာမနာမည်သုံးပြီး ပစ္စည်းပစ္စယအစုံအလင် သွားတောင်းလာတယ်။ အိမ်ကတော့ ခေါက်ဆွဲထုတ်ယူလာလို့ ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ်။ စားတဲ့အချိန်ကလည်း စာသင်ချိန်။ ခုံအောက်ထဲဝင်ပြီး ပြုတ်စားတယ်။ အတန်းက သိပ်မကျယ်တော့ ခေါက်ဆွဲက ပြုတ်တာနဲ့ အနံ့မွှေးမွှေးလေးက သမိုင်းဆရာမရဲ့ အနံ့အာရုံကို နှိုးဆွတော့တာပေါ့။ အဲ့မှာပဲ ကွိကနဲမိပြီး အတန်းမှူးရုံးခန်းရောက်ရော။ နောက် အလျဉ်းသင့်မှ သူဆိုးတာတွေ ထပ်ပြောဦးမယ်။
၅တန်းနှစ်လည်လောက်ကစပြီး ကဗျာနဲ့ ကဗျာ့သူငယ်ချင်း အကြင်နာ မုန်းဈေးတန်းသွားမုန့်စားပြီဆို သူက အနောက်က ပါလာတတ်တယ်။ ဘာမှလိုက်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကဗျာတို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာပဲ မုန့်စားရင်း ကဗျာ့ကို လှမ်းလှမ်းကြည့်တတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေကဗျာတို့က ပညာပြချင်ရင် လူရှုပ်တဲ့ မိန်းကလေးအိမ်သာထဲ ၀င်သွားပြီး မျက်ခြေဖြတ်တတ်တယ်။ အဲ့ခါကျရင် မုန့်စားကျောင်းတတ်ရင် လာပြောတယ်... "ကဗျာ နင်ကလည်း အကျင့်ပုတ်လိုက်တာဟာ.. ဘာလို့ အိမ်သာထဲဝင်သွားတာလဲ ... နောက်ဆို မုန့်စားကျောင်းတက်ခံနီးမှ သွားဟာ"ဆိုပြီး အမိန့်ပေးသလို တောင်းပန်သလိုလို လာပြောတတ်သေးရဲ့။ ကဗျာကတော့ ခပ်မာမာပဲ။ နင့်အပူပါလား ငါ့ဟာငါဘယ်အချိန်သွာသွား ဆိုတဲ့ တစ်ခွန်းထဲနဲ့ ပြန်မာန်နေကျ။
ကဗျာတို့ အသက်ကလေးက ၁၁နှစ် ၁၂နှစ်ဆိုတော့ တော်တော် ပဲများတတ်လာပြီ။ ၅တန်းကစပြီး ထမီစ၀တ်ရတာဆိုတော့ စ၀တ်ဝတ်ချင်းကတော့ ပုံမကျပန်းမကျဖြစ်နေပေမဲ့ ခုတော့ ပုံကျကျလေးဝတ်တတ်လာပြီ။ ခါးကြားလေးမှာ လက်ကိုင်ပုဝါလေးကို တြိဂံပုံလေးခေါက်ပြီး ထိုးတတ်တာလည်း အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ အစ်မကြီးတွေက ဆံပင်ကို လှလှလေး စည်းပေးပြီး ကလစ်မျိူးစုံတတ် ဖဲပြားလေးတွေချည်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်တတ်နေပြီလေ။
ဇော်အောင်ကလည်း မခေဘူး .. ဆံပင်ဘေးခွဲ ခေါင်းလိမ်းဆီနဲ့ ဆံပင် ၃၊၄ ချောင်းက ထောင်ထားလိုက်သေး။ ပြီတီတီမျက်နှာပေးကတော့ မပြောင်းသေးပါဘူး။ ပိုတောင် အတင့်ရဲလာသေး။ တွေ့တာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လိုက်တောင်းနေတော့တာပဲ။ မသိတာလည်းမဟုတ်ဘူး ။ ကဗျာ့သူငယ်ချင်းတွေဆီက သူက မုန့်ကျွေးပြီး တောင်းထားပြီးသား။ တမင်တကာ ကဗျာ့ကို လိုက်ရစ်တာ။ တစ်နေ့ကျတော့ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တယ်။ အကြင်နာအသံလိုမျိုး လုပ်ပြောပြီး ကဗျာ့ကို ခေါ်ခိုင်းတယ်။ ဖုန်းကိုင်ကတာ ကဗျာ့အစ်ကို ... သူကတော့ အကြင်နာထင်ပြီးတော့ ကဗျာဖုန်းကိုင်ဖို့ မအားသေးဘူး အိမ်သာတက်နေတယ်ဆိုပြီး ပြောလွှတ်လိုက်တယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ ကဗျာကို လိုက်စရော.. ငါဖုန်းဆက်တာ နင်က အီအီးပါနေတယ်ဆိုပြီး။ ကဗျာမှာ ရယ်ရခက် ငိုရခက်နဲ့ပေါ့။
ကဗျာသု့ကို ခင်စတော့ ပြုလာပြီ။ သူက အရမ်းရီရတယ်။ သူစကားပြောတာနားထောင်ရင် ပါးစပ်ကို မပိတ်ရဘူး။ ပေါက်တတ်ကရအရမ်းပြောတတ်ပဲ။
တစ်နေ့ကျတော့ ကဗျာမုန့်စားကျောင်းတက်လို့ အတန်းထဲကို ပြန်ရောက်တော့ က ဗျာ့စားပွဲနားမှာ သူကော သူ့သူငယ်ချင်း ၃ယောက်ကော ရောက်နေတယ်။ ကဗျာလည်း ရောက်ရော "ဟဲ့ ကဗျာ နင့်ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်ကြည့်စမ်းပါ" လို့ ဇော်အောင်က ပြောတယ် ။ ကဗျာက လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအ်ိပိစိလေးကို အယောင်အယောင်အမှားမှားနဲ့ ဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲ့တော့ သူက "ဟဲ့ နင့်မှာ ပိုက်ဆံအိတ်က ဘယ်နှစ်လုံးတောင်မှလဲ ငါပြောတာ အဲ့ဒီအိတ်မဟုတ်ဘူး နင့်လွယ်အိတ်အရှေ့အိတ်ထဲက ခေါက်ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို ပြောတာ။ မြန်မြန်ဖွင့်ကြည့်စမ်းပါ... "။ ကဗျာလည်း နဂိုကမှ စပ်စုစိန်ဆိုတော့ ဘာမှပြန်မငြင်းနေတော့ပဲ သိလိုစိတ်နဲ့ မြန်မြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ ပန်းရောင် စာခေါက်လေး တစ်ခုတွေ့တယ်။ ကဗျာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဇော်အောင်ပေးတဲ့ ရည်းစားစာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ ဘေးနားမှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းပြီးလာကြည့်နေကြတော့ ကဗျာတော်တော်ထူပူရှက်သွားတယ်။ ဇော်အောင်ကိုလည်း စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ မြန်မာစာဆရာမ၀င်လာရော။ ကျောင်းသားတွေအားလုံး ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်ထိုင်ကြရတယ်။ ကဗျာလည်း ဆရာမစာသင်ပြီးတာ စောင့်ပြီး ပြီးတာနဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပန်းရောင် စာခေါက်လေးကို ဆရာမကို သွားအပ်လိုက်တယ်။ ကဗျာဘာလို့ အဲ့လိုလုပ်မိလည်း ကဗျာကိုယ်ကဗျာလည်းမသိဘူး ။ စိတ်ဆိုးလို့လား ဇော်အောင်ကိုမုန်းလို့လား... ဆရာမကတော့ လက်ထဲရောက်လာတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး ဇော်အောင်ကို အတန်းရှေ့ခေါ်ပြီး ၃ ချက်လောက် ဗြင်းလွှတ်လိုက်တယ်။ ဇော်အောင် အရိုက်ခံရပြီးပြန်လာတော့ ကျွန်မခုံနားက ဖြတ်သွားတဲ့အချိန် ကျွန်မကို စေ့စေ့ကြည့်သွားတယ်။ သူ့မျက်နှာတွေ နီရဲနေတယ်... ရှက်စိတ်ကြောင့်လား။ ဒေါသကြောင့်လား ?
မှတ်ချက်။ ဖြစ်ရပ်မှန်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ကူးဖန်းတီးထားသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဘာတွေတုန်း at 9:57 AM7comments
ငါသာမင်းလောင်း ထီးဖြူဆောင်း ... အဲ့ဒါဘာတုန်း။။။။။
ကဲ မသိရင်ပြောပါမယ်... အဖြေမှန်ကတော့ "ဘာတွေတုန်း"ဆိုတဲ့ ငတိမလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်... =)ဟုတ်တယ်လေ..
ဟိဟိ.. အပျင်းထူနေတာ ဘလော့ကို အသစ်မတင်တာ ခုဆို၆လတောင်ရှိပြီ...နောက်ဆို တစ်နှစ်ကို တစ်ပို့စ်ပဲ တင်ဖြစ်မလားပဲ...အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အပေါ်က ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားပီ :P
ခုမှ ရုတ်တရက်ကြီး ဘလော့ပြန်ရေးလို့ မလန့်သွားပါနဲ့ဦးနော်... စလုံးက သူငယ်ချင်းဘော်ဘော်တွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ website လေးတစ်ခု အကြောင်းပြောချင်လို့ပါရှင့်။ အခုနေတဲ့အိမ်မှာ အဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်... ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေမောင်နှမတွေ စလုံးလာမှာမို့လို့ နေစရာရှာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်... အခန်းရှာ အိမ်ရှာရင် ခေါင်းပူရတယ်ဟုတ်? အထူးသဖြင့် မြန်မာအိမ်တွေ ရှာမယ်ဆိုရင် အသိအိမ်တွေလိုက်မေးရ... သူငယ်ချင်းတွေဆီ sms ပို့မေးရ... peninsula သွားပြီး ဒေါ်သန်းသန်းနုဆိုင်က စာအုပ်တွေသွားမွှေရနဲ့ လုံးချာနေရော... ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုအိမ်ရှာရတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ကြုံဖူးတော့ အခက်အခဲလေးတွေကို သိနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ မြန်မာအိမ်ရှာတဲ့ website လေးတွေ ပေါ်လာရော... shweroom တို့ shwesaneain တို့ဆို စလုံးက မြန်မာအတော်များများသိကြမှာပါ... တော်တော်ကိုလည်း အဆင်ပြေစေတဲ့ website လေးတွေပါ.. အခုအဲ့ဒီwebsite လေးတွေလိုပဲ အသုံးဝင်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မြန်မာအိမ်ရှာလို့ရတဲ့ websie လေးတစ်ခု ထပ်ရှိပါသေးတယ်...
အဲ့ဒီ website လေးက စတာ မကြာသေးတဲ့အတွက် လူသိတော့နည်းနည်း နည်းသေးတယ်ရှင့်.. ဒါပေမဲ့ တကယ်ကို သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်... ကြော်ငြာတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထက်မနေဘူး။ ဥပမာ.. တခါတလေ.. ကြော်ငြာတဲ့လူတစ်ယောက်တည်းကပဲ စာမျက်နှာတစ်ခုလုံး သူ့ကြော်ငြာကြီးပဲဖြစ်အောင်လို့ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာပဲ အမြဲရှိနေအောင် ဆိုပြီး အများကြီး ကော်ပီ ပေ့စ် လုပ်ပြီးတင်ထားတာမျိူး တွေ့ဖူးကြမှာပါ... အဲ့လိုဆို အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြရတယ်..ဒီwebsite လေးမှာတော့ အဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမရှိဘူး ... ပြီးတော့ ကြော်ငြာတော်တော်များများကလည်း ဖုန်းဆက်ပြီး မေးစရာမလိုလောက်အောင် အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးထားတော့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာတာပေါ့ရှင်..
အော် ပြောဖို့ကျန်သေးတယ်... စလုံးမှာ property agent လုပ်နေကြတဲ့ ကိုကိုမမ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်တို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားသေးတယ်။ အိမ်ကြော်ငြာ ပို့စ်၅၀ပြည့်အောင် အရင်ဆုံးတင်တဲ့သူ ၃ဦးကို ငါးလတိတိ Agent ကြော်ငြာကို အခမဲ့ကြော်ငြာပေးဦးမတဲ့.. မိုက်တယ်ဟုတ်..
ဒီနေရာကနေ အဲ့ဒီ website လေးကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်.. နာမည်က www.ishareflat.com ပါ.. Bookmark တောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်...သူ့ရဲ့ facebook page လေးလည်း ရှိပါတယ်..ဒီနေရာလေးက သွားပါရှင့်.. အခါအခွင့်သင့်ရင် သွားရောက်လည်ပတ် Like လုပ်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်..
ကျွန်မအခုလို ကြော်ငြာပေးလို့ ပိုက်ပိုက်ရတယ်လို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့ရှင်... ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်website လည်း မဟုတ်ရပါ.. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ website လေးကို သုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ တပြားတချပ်မှကို မယူဘဲ လက်အညောင်းခံပြီး ကြော်ငြာပေးတာပါရှင့်.. အားလုံးကို အဆင်ပြေစေချင်တဲ့ စေတနာအရင်းခံလေးနဲ့ပါ...=]
အားးးးးးးးးးးးလက်တကယ်ညောင်းပီ... ဒီမှာတင်ရပ်ကြောင်း :D
Posted by ဘာတွေတုန်း at 9:03 AM 1 comments
Posted by ဘာတွေတုန်း at 11:13 PM5comments
Jurong Point သို့အလည်တခေါက်
ဒီကနေ့ ညနေ၄နာရီ အတန်းပြီးတော့ အိမ်မပြန်ချင်သေးတာနဲ့ နဂိုထဲက ခြေများတဲ့ကျွန်မ jurong pointကို တစ်ယောက်တည်းရောက်သွားရော..
ဟိုရောက်တော့ ဗိုက်ကနည်းနည်းဆာတာနဲ့ janpanese food street ကနေဖြတ်အသွား sushi တစ်တုံး ၀ယ်စားတယ်။ ပြား၇၀တဲ့ စားလို့လည်း သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ လမ်းသွားရင်း ဟိုငေးဒီငေး တွေ့သမျှအရုပ်ဆိုင်ဝင် အိမ်ပြောင်းရင် လိုမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ လိုက်ကြည့်ရင်း ခြေထောက်ညောင်းလာတာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ ကြည့်တော့မယ်ဆိုပြီး အပေါ်ထပ်က Courts နဲ့ Harvey Norman ကိုချီတက်တယ်။ သွားကြည့်တာက portable air con..ခုပြောင်းမယ့်အခန်းက air con မရှိဘူး အခန်းကလည်း နည်းနည်းလှောင်တာနဲ့ ဈေးနည်းနည်းသက်သာတာရှိရင် ၀ယ်မယ်ဆိုပြီး သွားကြည့်တာ။ ဈေးတွေက သက်သာရှာပါတယ်။ အပေါဆုံးက $600 ကျော် ကနေ $999 ထိရှိတယ်။ =(မှန်းထားတာနဲ့က ကွာနေတော့ နောက်မှပဲ ကြည့်တော့မယ်ဆိုပြီး the market place ဖက်ကို လျှောက်တယ်။
အဲ့မှာ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဘိုတစ်ယောက်က ကြော်ငြာစာရွက်လေးနဲ့အတူ ခေါင်းလျှော်ရည်လိုအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကမ်းတယ်။ ကျွန်မလည်း အရင်တခါ flyerဝေတဲ့ အလုပ်မျိူးလုပ်ပြီးကတည်းက လမ်းမှာဝေတဲ့ကြော်ငြာတိုင်းကို ယူပေးတတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့ လှမ်းယူလိုက်တယ်။ [ယူမိတာကိုက အနော့်အမှားပါ =( ] ကျွန်မလှမ်းယူပြီးထွက်လာတော့ အဲ့လူက လှမ်းအော်ပြီးမေးပါတယ် "Where are you from?"တဲ့။ ကျွန်မက "Myanmar" လို့ပြောတာကို သူက"Japan" လို့ ကြားတယ်။ ကျွန်မက "No"လို့ပြောတော့ အဲ့လူက အနားရောက်လာရော။နောက်ထပ်မေးပြီးတော့မှ "Oh you are Myanmar? I really like to be friend with Myanmar people..Can you show me your hand?" တဲ့.။ ဘာတွေပြောမှန်းလဲမသိဘူး။ ကျွန်မလည်း ကြောင်ပြီးလက်ပြမိလိုက်တယ်။ အဲ့မှာ ကျွန်မညာလက်ကို ဆွဲယူပြီးတော့ လက်သည်းကို တံစဉ်းတိုက်တဲ့ အတုံးလေးနဲ့တိုက်တယ်။ ကျွန်မလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လက်ကို ပြန်ဆွဲတာပေါ့။ အဲ့လူက မလွှတ်ပေးဘူး။ ပြီးတော့ စကားဆက်ပြောတယ်။ "How old are you?"တဲ့။ ကျွန်မလည်း ၂၁ ပါ လို့ပြောတော့။ "Hey..dun bluff me..tell me seriously"တဲ့။ (ကျွန်မက လူကောင်အတော်ညှက်ပါတယ်။ အရပ်ပုတယ်ဆိုပါတော့။ တချိူ့တွေဆို secondary ကျောင်းသူဆိုပြီးတော့တောင်ထင်ကြတယ်။ ရုပ်နုလို့တော့ ဟုတ်မယ်မထင်)ဟိုလူက အဲ့လိုပြောနေတုန်း ကျွန်မလက်သည်းကို တိုက်နေတုန်းပဲ။ ကျွန်မလည်း သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ "Sorry..I am inahurry.Need to meet my friend" လို့ပြောတာတောင် ဟိုဘိုးတော်က ကျွန်မကို စူးစူးကြီးကြည့်ပြီး "Why inahurry? hum?"လို့ပြောပြီး ကျွန်မကို သူ့ပစ္စည်းတွေ စီထားတဲ့နေရာကို ဆွဲခေါ်တယ်။ ကျွန်မလည်း သူ့ကြည့်ပြီး ကြောက်လာတာနဲ့ လက်ကိုဆောင့်ဆွဲပြီး "I will come back later..really inahurry" ဆိုပြီး နောက်ကြောင်းလှည့်မကြည့်ပဲ အမြန်လစ်ထွက်လာတယ်။ အဲ့ဒါတောင် အနောက်ကလှမ်းအော်ပြောတာ ကြားလိုက်ရသေးတယ်။ "Ok..Come back later.. I will wait for you " တဲ့။ ကြက်သီးတောင်ထတယ်။
အဲ့လူကြီးရုပ်က အင်းဂလိပ်ကားထဲက လူဆိုးရုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ သူတိုက်ထားတဲ့လက်မကို ကြည့်လိုက်တော့ လက်မက လက်သည်းအကြည်ရောင်ဆိုးထားသလို ပြောင်နေတယ်။ သူတို့ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေက skin,nail care နဲ့ hand soap တွေထင်တယ်။ သူflyer ပေးတုန်းက တံဆိပ်နာမည်ကို မဖတ်လိုက်ပေးမဲ့ ပုံတော့ မြင်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ brand က နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ ရောင်းတာများတယ်။
Funan mall macdonald ရှေ့မှာ push cart နဲ့ ရှိတယ်။ marina square မှာ ဆိုင်ခန်းနဲ့။jurong point မှာတော့ road showလုပ်နေတာ။ ကျွန်မ Funan mall မှာတုန်းက တခါခံရပြီးပြီ။ အခုသေချာမကြည့်ပဲ flyer ယူမိလို့ ထပ်ခံရတာ။ Funan မှာတုန်းက အဲ့ဘိုမက ကျွန်မကို သူတို့product စမ်းကြည့်ဖို့ခေါ်တော့ မားသား အိမ်သာသွားနေတာ စောင့်နေရမဲ့အတူတူ စမ်းလိုက်မယ်လေဆိုပြီး သူပေးတဲ့ သဲစေ့လိုဟာလေးတွေကို လက်ဖမိုးမှာလိမ်း ပြီးတော့ ရေနဲ့ဆေး..အသားချောသွားလားမေးတော့...ဟုတ် ချောသွားတယ် လို့ပြောတော့ သူတို့ပစ္စည်းကို အတင်းရောင်းရော..အဲ့လို လက်ဆေးတဲ့ သဲစေ့လေးတဘူးကို $100 ကျော်လားမသိဘူး ရောင်းတာ။ ကျွန်မလည်း မ၀ယ်တော့ဘူး သွားတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ အတင်းဆွဲပြီးရောင်းတာ။ တော်သေးတယ် မားသားရောက်လာလို့။ ခုjurong point ကလည်း အဲ့လိုပဲ။ သူကပိုဆိုးတယ် ..စမ်းမယ်တောင် မပြောရသေးဘူး အတင်းအကျပ်လုပ်တာ။
သတိပေးချင်တာ နောက် shopping mall တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားဘိုတွေချည်းပဲ ရောင်းတဲ့ skin care shop လေးကို မြင်ရင် မ၀ယ်ဘူးဆိုရင် ဝေးဝေးရှောင်ပါလို့.။ သူတို့ရဲ့ဈေးရောင်းပုံက အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မ၀ယ်ဘူးဆိုရင်တောင် ပြူးပြဲပြပြီး အတင်းဝယ်ခိုင်းပါတယ်။ ပစ္စည်းကောင်းမကောင်းတော့ မသိပါ။ ပစ္စည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်မဘယ်တော့မှ ၀ယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုင်နာမည် ကျွန်မမှတ်မိတာ မမှားဘူးဆိုရင် Dead Sea Premier ထင်တယ်။ မသေချာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို ဘိုတွေချည်းပဲရောင်းတဲ့ဆိုင်က ရှားပါတယ်။ ၃ဆိုင်လုံးက တူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေလည်း ထွက်လာပြီးရော ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ပလာတာကြက်အူချောင်းညှပ်လေးမြန်မြန် ၀ယ်စားပြီး ဘာမှမ၀ယ်ပဲ လက်ဗလာ အိမ်ပြန်လာပါတော့တယ် =P
Posted by ဘာတွေတုန်း at 5:41 AM7comments
စာမေးပွဲရှိခြင်း၏ ကောင်းကျိူးနှင့် ဆိုးကျိုး
၁)semester တစ်ခုလုံး သင်သမျှစာများကို သေသေချာချာဖတ်ဖြစ်စေသည့်အတွက် စာတတ်စေသည်။ (ဟုထင်မှတ်ရသည်။)
၂) စာမေးပွဲနီးလေ ဘုရားပိုရှိခိုးဖြစ်လေ..ဆရာ ဆရာမ များကို မေတ္တာပို့ဖြစ်သဖြင့် ကုသိုလ်ရသည်။ :D
၂) ထို့အတွက်ကြောင့် လူကို ရုပ်ဆိုးစေသည် (ဥပမာ ..၀က်ခြံပေါက်လာခြင်း)
၃) လူကို ၀စေသည် (စာလုပ်ရင် energy ကုန်သည့်အတွက် များများစားရသည်.. )
၄) အိပ်ရေးပျက်စေသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေသည်။
၅) ညတွင် ကျောင်းတွင် စာမပြီးသည့်အခါ နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကို မမှီသည့်အတွက် taxi နှင့် ပြန်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုက်ဆံကုန်သည်။
၆) မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများလည်း မသွားနိုင်သဖြင့် လူမှုရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
၇) ကျောင်းနှင့်အိမ်မှအပ ဘယ်မှမသွားဖြစ်သဖြင့် ပြင်ပလောကနှင့် အဆက်ပြတ်ရသည်။(ဥပမာ.. သူများတကာတွေ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကတော့ဖြင့် ဘယ်လိုကောင်းတယ် ..ဟိုမှာတော့ဖြင့် ဘာပစ္စည်းတွေ ဘယ်လိုဈေးချနေတယ်ဟုပြောရင်လည်း ..ဟုတ်လားဟု ပြောရုံကလွဲပြီး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေရသည့် ဒုက္ခလည်း ကြီးသည်။)
ကဲ... ဒါတွေကို ကြည့်တာနဲ့ စာမေးပွဲဆိုသည့်အရာက ကောင်းလား ဆိုးလားဆိုတာ သိသာနေပြီ ထင်ပါရဲ့... ဟီးး
ထပ်ဖြည့်ချင်တဲ့ ကောင်းကျိူးဆိုးကျိူးလေးတွေရှိရင်လည်း ကွန်မန့်မှာ လွတ်လပ်စွာရေးသွားနိုင်ပါ၏..
(ပေါက်ကရ စိတ်ထဲပေါ်တာလေးတွေ ချရေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း...) :D
Posted by ဘာတွေတုန်း at 12:48 AM7comments
ဘာတွေတုန်းတစ်ယောက် အပျင်းထူပြီး သူ့ဘလော့ကြီးကို ပစ်ထားတာ ၄လတောင် ပြည့်ရော့မယ်။ :) စာတွေမနိုင်တာရယ် ရန်ကုန်ပြန်သွားတာရယ် ပရောဂျက်ပညာတန်ဆောင်ရယ်ကြောင့် ဘလော့ဖက်ကို လုံးဝခြေဦးမလှည့်ဖြစ်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ ရေးချင်တာတွေက အများကြီး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကူးထဲစာစီပြီးတော့ ဘလော့ပေါ်ထိ မရောက်လာခဲ့ဘူး။
ပရောဂျက်ပညာတန်ဆောင်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ စုပေါင်းပြီး တွံတေးက ဘုရားကြီးကျေးရွာလေးက မိဘမဲ့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာ စာသွားသင်ရတဲ့ ပရောဂျက်လေးပါ။ မြန်မာ၈ယောက် စင်ကာပူသား၁၂ယောက် နဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ volunteer group လေးပေါ့။ အဲ့ဒီပရောဂျက်ကြော်ငြာလေးတွေ့ကတဲက ကျွန်မတော်တော်စိတ်ဝင်စားပြီး ဟောပြောပွဲ သွားနားထောင်ခဲ့တယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်မအဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲ ပါဝင်ဖို့ ချက်ချင်းစာရင်းပေးခဲ့မိတယ်။ နာဂစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီမိဘမဲ့ကျောင်းလေးက ကလေး ၂၀၀ ကနေ ၄၀၀ အထိများလာခဲ့တယ်။ အမှန်တကယ်ကို အကူအညီတွေလိုအပ်ပါတယ်။ မိဘမဲ့ကျောင်းလေးကို အုပ်ချူပ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းဟာလည်း ၂ဆလောက် တိုးလာတဲ့ကလေးဦးရေကြောင့် အစားအသောက်တောင် အရင်လို သိပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကျွေးနိုင်ဘူးဆိုတာ အပြောသက်သက်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်မကိုယ်တိုင် အဲ့ကို ရောက်သွားမှ မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အလှူရှင်မရှိရင် ထမင်းတစ်ဇလုံနဲ့ ဟင်းရွက်ဟင်းချိူလေးသာ သောက်ရတဲ့ကလေးတွေ မြင်ပြီးတော့ ကျွန်မနောက်ဘယ်တော့မှ အိမ်မှာ ဟင်းဂျီးမများတော့ဘူးလို့တောင် စိတ်ထဲကတွေးမိတယ်။ ဒီလို အကူအညီလိုနေတဲ့ကလေးတွေကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေတောင် သွားကူဖို့ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလည်း တထောင့်တနေရာကနေ ပါသင့်တယ်ဆိုပြီး အဖွဲ့ထဲဝင်ခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီပရောဂျက်အတွက် ကျွန်မတို့အတော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်။ စာတွေမနိုင်တဲ့ကြားက semester တစ်ခုလုံး တပတ်ကို တရက် အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး စင်ကာပူသားတွေကို မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းတွေ သင်ပေးရတယ်။ အဖွဲ့ထဲမှာ ကော်မတီတွေအများကြီးခွဲထားတဲ့ အထဲက ကျွန်မက ပညာရေးကော်မတီမှာပါလိုက်တယ်။ စလုံး၂ယောက် မြန်မာ၂ယောက်။ သင်ရမဲ့ဘာသာတွေက English, Arts and Crafts, Geography,Physics, Chemistry နဲ့ Biology စုစုပေါင်း ၆ဘာသာ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာ၂ယောက်က သိပံ္ပဘာသာတွေ သင်ရတယ်။ အကြီးတန်းကလေးတွေကိုပေါ့။ ၈တန်းနဲ့ ၉တန်း။ ကျွန်မတို့ အထက်တန်းတုန်းက သိပံ္ပဘာသာတွေကို သီအိုရီတွေသာ သင်ရပြီး လက်တွေ့လုပ်ခွင့်မရခဲ့တော့ ကလေးတွေကို သူတို့ဖတ်စာအုပ်ထဲက experiment တွေကို ပစ္စည်းကိရိယာအစုံနဲ့ လက်တွေ့ပြမယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ မြန်မာ၂ယောက် ပစ္စည်းတွေဝယ် ပြီးတော့ တကယ်ပြမှ အရှက်မကွဲအောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရင်စမ်းကြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မပြန်ခင်နဲ့ စာမေးပွဲပြီးတဲ့ တပတ်စပ်ကြားမှာ အလုပ်တော်တော်ရှုပ်သွားပါတယ်။
ဒီပရောဂျက်မှာ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို တခုချင်းပြောပြမယ်ဆိုရင် ကျွန်မအခန်းဆက်တွေ ရေးရမှာ အမှန်ပဲ။ ရယ်စရာတွေ စိတ်ညစ်စရာတွေ အဆင်မပြေမှုတွေကြားထဲက ၈ရက်ကြာတဲ့ ခရီးတိုလေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။ ခရီးလည်းက နည်းနည်းကြမ်းတော့ တရက်ကို ၄နာရီကားစီးရတဲ့ ကျွန်မတို့ ကားခုန်တဲ့ဒဏ်ကြောင့် ဖျားတဲ့လူများ လဲတဲ့လူလဲပေမဲ့ ရှိတဲ့လူနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေဆီက ဆရာမလို့ ခေါ်သံကြားရင် အဲ့ဒီအမောတွေ ပြေသွားတာတော့ အမှန်ပါ။ ကျွန်မတို့ နားတဲ့အဆောင်က ထွက်တာနဲ့ အထုပ်တွေ လာပြေးဆွဲ ပန်းတွေလာပေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ဟာကို တကယ့်ဆရာမအစစ်လို့တောင် ဘ၀င်လေဟပ်မိပါရဲ့။ ဟိဟိ။ နောက်ဆုံးနေ့မှာ culture exchange လုပ်ကြတော့ ကလေးတွေက ကရင်ဒုံးယိမ်းတွေ ပအို့ဝ်အကတွေ ကပြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့တွေက Singapore Town သီချင်းရယ် Wondergirls ရဲ့ Nobody သီချင်းနဲ့ ကပြကြရတာ ရယ်ရလွန်းလို့ အူတောင်တက်တယ်။ အဟုတ်။ပုံကို ကြည့်ပါလား။ :D
မကခင် စင်ပေါ်မတက်ခင်ကကော စင်ပေါ်ကဆင်းတော့ရော ကလေးတွေက အော်တိုစာအုပ်လေးတွေကိုင်ပြီး ဆရာမသမီးကို အော်တိုလေးရေးပေးပါဆိုပြီး ကျွန်မတို့ အားလုံးကို လိုက်ရေးခိုင်းတာ အယောက် ၅၀ကျော်လောက်လည်းကျရော မရေးနိုင်တော့လို့ လူအုပ်ကြားထဲက မနည်း ထွက်လာရတယ်။ မသိရင် celebrity လိုလို ဘာလိုလို။ ဟဲဟဲ။ ဒါတောင် ထွက်လာတဲ့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကလေးတွေက လိုက်ရေးခိုင်းလို့ လမ်းလျှောက်ရင်း ရေးပေးရတယ်။ ပြောရရင် ကျွန်မဘ၀မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရေးပါပါလားလို့ ခံစားမိတာ ဒီတခါပဲရှိပါတယ်။ ကြော်ငြာခဏဖြတ်မယ်နော်။ ကျွန်မပိုလီပြီးတော့ ကျောင်းဆက်တက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ကျွန်မကိုယ့်ဟာကိုယ် အသုံးမကျသလိုခံစားရတယ်။ ကျောင်းမှာဆို ကျွန်မစာမလိုက်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေ လွယ်လွယ်နဲ့ နားလည်နိုင်တဲ့စာမျိူးတောင် ကျွန်မချက်ချင်းနားမလည်းဘူး။ အမြဲတမ်း သူများကို ဒုက္ခပေးပြီး စာရှင်းခိုင်းရတယ်။ သူတို့တွေ စာမရတဲ့ အချိန်ကျတော့ ကျွန်မက ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက်မရှင်းပြနိုင်ဘူး။ လူတစ်ယောက် နားလည်အောင် လိပ်ပတ်လည်အောင် မရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ကျွန်မရှင်းလိုက်မှ သူတို့ ပိုပိုရှုပ်သွားတဲ့အတွက်လည်း အားနာမိတယ်။ ကျွန်မက သူတို့အတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့စိတ် အမြဲဝင်လာတယ်။ အဲ့လို စိတ်အားငယ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့လည်း ဘလော့ဖက်ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်တာပါမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပညာတန်ဆောင်ပရောဂျက်ကြောင့် ကျွန်မအရင်ကထက်စာရင် နည်းနည်းတော့ စိတ်အားတက်လာတယ်လို့ ပြောရမယ်။
ပြောရင်းက စကားလမ်းကြောင်းက ပြောင်းသွားပြီ။ PPT ဖက် ပြန်လှည့်ဦးမယ်။ အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ ပြန်ခါနီးလည်းကျရော ကျွန်မရဲ့တပည့်လေးတွေက ကျွန်မကို လက်ဆောင်လေးတွေ လာပေးတယ်ဗျ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ သော့ချိတ်လေးတွေ ဟမ်းချိန်းလေးတွေ။ ကလေးသေးသေးလေးတွေကျတော့ ကျွန်မကို သူတို့ပေးစရာမရှိလို့ ရှိတာလေးပေးပါရစေဆိုပြီး ၀တ်ထားတဲ့ ကလစ်တွေ အလှလက်စွပ်လေးတွေ ချွတ်ပေးတယ်။ ဘယ်လိုမှ မယူဘူးပြောပြော မရဘူး။ မယူရင် ငိုမဲ့မဲ့လေးတွေ ဖြစ်ရော။ ကျွန်မမှာလည်း မသိရင် မိဘမဲ့ကျောင်းလာပြီးတော့ ကလေးတွေကို ဓားပြတိုက်နေသလိုပဲ။ "ရှိတာအကုန်ချွတ်"ဆိုပြီးတော့လေ။ ဟဟား။ အမယ် လက်ဆောင်ပေးတဲ့ထဲမှာ လေးခွလည်း ပါတယ်ဗျ။ သူတို့ဆရာမကို မျောက်မူးလဲထင်နေလို့လားမသိ။ ကျွန်မပုံတူလေးတွေ ဆွဲထားတာလည်း ပါတယ်။ အဲ့ထဲက တော်တော်လှတဲ့ပုံလေး ကျောင်းမှာကျန်ခဲ့တယ် လောလောလောလောနဲ့ ပြန်ခဲ့ရလို့ :( အောက်ကပုံလေးက သူတို့ဆီက ကျွန်မရထားတာလေးတွေပေါ့။ တကယ်ကို အမှတ်တရပါ။ သူတို့ရဲ့ စေတနာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ကြွားပါရစေနော်။ ကြွားတယ်လို့ မမှတ်ကြေး =)
ကဲ ရေးရတာလည်း လက်ညောင်းသွားပြီ... ဒီမှာတင်ပဲ တခန်းရပ်ပါစေ။ ကျွန်မ ရောက်တတ်ရာရာတွေ ရေးထားတာကို သည်းခံပြီး အဆုံးအထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by ဘာတွေတုန်း at 4:21 AM6comments
ဒီတလော ကျောင်းစာတွေပိနေတာနဲ့ ဘလော့လေးကိုလည်း လုံးဝ ပစ်ထားမိနေတယ်။ ရေးလက်စလေးတွေတော့အများကြီးပဲ။ ပြီးအောင်ရေးပြီး တင်ဦးမယ်။ အပေါ်က သီချင်း၂ပုဒ်ကို ဒီရက်ပိုင်း အတော်ဓါတ်ကျနေတယ်။ အိမ်မှာနေရင် အဲ့ဒါပဲဖွင့်ထားတာ များတယ်။ တစ်ပုဒ်က နိုင်းဝမ်းဆိုထားတာ။ ကမ္ဘာငယ်လေးတဲ့။ နောက်တစ်ပုဒ်က IMP က ပူစူးဆိုထားတာ။ မင်းစိတ်တိုင်းကျ တဲ့။ စာသားတွေလည်း ထိတယ်။ နားလည်းစွဲလို့ နားထောင်မိနေတာဖြစ်မယ်။ :)
Posted by ဘာတွေတုန်း at 7:47 AM2comments